News - 5 Isi ihe na-emetụta akara njirimara nke akara igwe laser
5 Main ihe na-emetụta marking àgwà nke laser marking igwe
Arụ ọrụ igwe akara laser ga-eji nwayọ belata mgbe ejiri ya ogologo oge. Kedu ihe kpatara nke a? Gịnị bụ isi ihe na-emetụta ogo laser akara igwe?
1. Baịbụl hiwere isi n'ebe laser akara igwe
Ọnọdụ hiwere isi nke igwe akara laser bụ imetụta akara njirimara. Laser naanị na ọnọdụ elekwasị anya iji nweta oke ike na mmetụta, elekwasị anya iji chọpụta ma ọ dị mma, enwere mmetụta dị ukwuu na njikwa nhazi, na-emetụta laser ma ọrụ ziri ezi na mpempe akwụkwọ, iji nweta mmetụta nhazi. Gbanwezi oghere nke oscillating lens n'oge ọrụ laser na-enyere laser aka iru steeti ya kachasị ike. (Ọnọdụ kachasị ike na-egosi site na laser na-ewepụta ìhè na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ, yana ụda ụda yiri ụda).
2. The arụmọrụ nke laser doo anya na laser ilekwasị anya arụmọrụ ga-emetụta marking àgwà, na-elekwasị anya nke laser doo bụ nnọọ obere, otú ya ike bụ nnọọ lekwasị. Enweghị ezi na-elekwasị anya arụmọrụ, ị nwere ike ghara inwe ezigbo laser ntụpọ, ike iji elu ume njupụta nke laser, na ike nweta ihe laser marking igwe. N'ebe ọnọdụ kachasị mma, eriri a na-agbanye ọkụ na-adịkarị n'etiti enyo na-ahụ anya na iche.
3. movementgba ọsọ ọsọ nke ụdọ laser
Movementgba ọsọ ọsọ nke ụdọ laser bụkwa ihe dị mkpa. Usoro mmekorita laser na ihe onwunwe, ọsọ nke ụdọ laser ga-emetụta mmetụta nke mmekọrịta laser na ihe onwunwe.
4. Laser marking igwe jụrụ usoro
E kwesịghị ileghara usoro ịgba ọkụ laser anya. Cooling system is the entire laser machine can be stable and Sustaining marking premise, okpomọkụ ọ bụghị nanị na-emetụta ụzọ mgbapụ nke laser, ga-emetụtakwa usoro sekit, igwe laser na-arụ ọrụ igwe site na ngwaọrụ ikuku, belata okpomọkụ nke anụ ahụ, na belata akụrụngwa igwe, melite nkwụsi ike akụrụngwa, ma nwee obere olu nke ikpo ọkụ ọkụ ngwa ngwa.
5. Akụrụngwa nke akara laser
N'ezie, otu ihe eji eme laser, n'ihi akara ihe dị iche iche, akara ya dị iche iche, ọ bụrụ na ike laser ejiri dị iche, mgbe ahụ akara ahịrị ọma ga-adịkwa iche.